Wararkii maanta iyo Sweden 8 november 2021 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wararkii maanta iyo Sweden
mån 08 nov 2021 kl 16.31
Soo degso (2:24 min, MP3)
120 000 oo ganaax oo ka diiwaan gashan hayadda Kronofogden ee xisaabta khasabka ku soo celisa. sawir: Janerik Henriksson/TT
Ganaax badan oo dadkii lagu ridey aaney bixin. Xisbiga V oo shuruudo ku xiray hoggaamiyaha cusub ee S. Malmö oo ammaankeedu ka soo reeynayo sida baaritaan lagu ogaadey.
Idag kl 16.33
Tirikoob sheegaya in ay kordhayaan dadka qaatay talaallka covid-19 ee dagan xaafadaha ajaanibta ay u badantahay iyo warar kale.
Dhaleecayn loo gudbiyay cunnada laga iibsado dukaamada, Degmada Gävleborg oo shaqaalaha lacagaha u kordhin doonto iyo warar kale.